Ndinga gadzirise maapplication otomatiki Pane iPhone? Ehe! Heano Maitiro. - Iphone
foni isiri kutora izwi
yako id id yakavharwa
iphone 6 pamwe nedambudziko rekunzwa
Iwe unoda maapps ako eApple kuti agadzirise otomatiki, asi hausi sei. Hazvingave zvakanaka here kana iwe usina kufanira kuvhura iyo App Store uye woenda kunotsvaga matsva eapp app? Muchinyorwa chino, ndicha kukuratidza maitiro ekuvandudza maapplication otomatiki pane yako iPhone !
Maitiro Ekuvandudza MaApplication Otomatiki Pane iPhone
Kuvhura otomatiki maapplication ekushandisa pane yako iPhone, vhura Zvirongwa uye tinya pazita rako kumusoro kwechiso. Wobva wadzvanya iTunes & App Store .
Vhura switch iripedyo ne Zvidzoreso kubatidza otomatiki maapplication ekugadzirisa! Uchaziva kuti switch iripo kana iri green.
Ini Ndinogona Kuzvigadziridza iPhone Software Zvakare?
Kana yako iPhone iri kumhanya iOS 12, unogona kumisikidza yako iPhone kuti itore otomatiki uye isa yazvino iOS yekuvandudza. Tarisa uone chinyorwa chedu pane Otomatiki iPhone Downloads kudzidza zvakawanda.
maitiro ekuisa maapplication muarufabheti kurongeka pane iphone
Kugadziridza Mapurogiramu Akaitwa Nyore!
Iwe ikozvino unoziva chaizvo maitiro ekugadziridza maapplication otomatiki pane yako iPhone uye haumbofi wakamboita nemaoko kugadzirisa app kubva kuApp Store zvakare! Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo kwandiri, inzwa wakasununguka kuvasiya pazasi muchikamu chekutaura.